Akụkọ - Ngosipụta Vietnam
Na Eprel 10, ụlọ ọrụ anyị gara Vietnam iji sonye na ihe ngosi ahụ, na-egosi ngwaahịa ndị kachasị na ụlọ ọrụ anyị: akwa akpa, akwa ihe mkpuchi ahụ, na-enye ndị ahịa ngosipụta nke ngwaahịa na ike nke ụlọ ọrụ ahụ.
Hebei Ruimian Fabric Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ akwa akwa nkeonwe, nke bụ ọkachamara na-emepụta akwa, akwa mkpuchi na akwa akpa. Companylọ ọrụ ahụ na-akpa ajị anụ, na-anwụ, mbubata na mbupụ azụmaahịa n'otu, anyị nwere akụrụngwa mmepụta ụlọ, nke mba dị elu; A na-ebuga ọtụtụ ngwaahịa ndị ahụ na United States, Japan, Europe, Korea, Australia, Southheast Asia, Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara.
Companylọ ọrụ anyị na-enye ụdị akwa agba agba, akwa ọcha, akwa e ji esiji akpụkpọ anụ na akwa e biri ebi, na-egbo mkpa ndị ahịa nke akwa ọrụ pụrụ iche, dị ka mgbochi, ihe mgbochi mmiri, ihe mgbakwasị ụkwụ na ihe ndị ọzọ.
Kemgbe ntọala nke ụlọ ọrụ ahụ site na 1995, ụlọ ọrụ anyị na-enweta otuto dị elu nke onye ọrụ site na njikwa ngwaahịa mbụ yana usoro njikwa kachasị mma. Taa ndị ọrụ na Ruimian na-agbaso amụma nke '' ọmarịcha ezigbo ịdị n'otu ', na-aga n'ihu na -emepụta ọhụụ, na-ewere teknụzụ dịka isi, nke dị ka ndụ, ndị ahịa dị ka Chukwu, wee nyefee onwe gị iji nye gị ezigbo ogo, ntụpọ efu. Poly-Cotton bara nnukwu uru ngwaahịa.